mairie-antananarivo – Tohin’ny fidinana nataon’ny Ben’ny Tanàna Lalao Ravalomanana tao amin’ny boriboritany faha 4
Tohin’ny fidinana nataon’ny Ben’ny Tanàna Lalao Ravalomanana tao amin’ny boriboritany faha 4
auteur 16 febroary 2017
Nitaraina ny mpanasa lamba eo Fiadanana III N amin’ny faharatsian’ny toerana fanasana lamba sy ny mpitantana fa nentiny nitsoaka ny volan’ ny jirama ka tsy maitsy nanao tsipaipika ny mpanasa lamba hamerenana ny vola. Nilaza avy hatrany ny Ben’ny Tanana fa ho amboarina ity fanasana lamba ity sady hanolotra.
Raha ny teo Soanerana IIIi dia nisy ny olona nangataka amin’ny fanamboarana ny lalana miakatra ao aminy izay miteraka fahasahiranana kilemaina 2.
Nandray andraikitra amin’ny fanamboarana ny sisin’ny totohatra amin’ny lalankely CLD teny Soanierana koa ny Ben’ny Tanana izay tsy vita tao anatin’ny CLD ary hijery akaiky ny « dal » tsentsina. Hisy nyfifampiresahana amin’ny orinasa manodidina toy ny MAK MOTORS. Efa ela no tapaka ny rano eo amin’ny « bassin lavoir » SOANIERANA ka nanampy vola 200.000ariry ny Ben’ny Tanana hamerenana izany ho fanampiana ireo mpanasa lamba.